Fixing Google Contact Sync – Xiaomi Guide
Mi ဖုန်းတွေမှာ Google Service apps တွေကို Mi App Store ထဲကနေ Google app installer apk ဒေါင်းပြီး ထည့်သွင်းလိုက်တယ်။ Play Store, Gmail စတာတွေ သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် Google Account ထဲမှာ မှတ်ထားတဲ့ Contacts တွေက Sync ဖြစ်မလာဘူး။ အသစ်မှတ်ဖို့နေရာမှာလဲ Contact Source မှာ Google Account မပေါ်လာဘူး.. စတာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Mi ဖုန်းတွေအတွက် Google Service apps တွေကို အဆင်ပြေပြေထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ သည် Post [ -> Google App Install (MIUI 8,9.10) <- ] ကို ဖတ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ် Mi ဖုန်းအတွက်မဆို၊ ဘယ် MIUI version မဆို အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်နေတဲ့၊ လက်ကိုင်ထားသုံးနေလို့ရတဲ့ နည်းတစ်ခုပါပဲ။
Google Contacts Sync error နဲ့ ပတ်သက်လို့ အောက်ပါအဆင့်လေးတွေအတိုင်း Fix လုပ်ပေးပါ။
Google Calendar Sync, Google Contacts Sync, Google Play Services တို့ကို Auto Start List ထဲမှာ ထည့်ထားပေးပါ။ အောက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်း ဝင်ရှာပြီး လိုအပ်တဲ့ app အတွက် ON တာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ခုနက Google Calendar Sync, Google Contacts Sync, Google Play Services တို့ကိုပဲ တစ်ခုချင်းစီမှာ ဝင်ပြီး App ရဲ့ Permissions အကုန်လုံးသာ ON ထားပေးလိုက်ပါ။ App တစ်ခုထဲဝင်လိုက်၊ Permission တစ်ခုကိုနှိပ်.. Accept ရွေး.. နောက် Permission တစ်ခုကိုနှိပ်.. Accept ရွေး.. စသည်ဖြင့် အကုန်လုပ်.. ပြီးရင် Back Key နဲ့ပြန်ထွက်.. နောက် App တစ်ခုကိုရွေးလုပ်… စသည်ဖြင့် သုံးခုစာလုပ်ပေးရပါမယ်။ အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းကြည့်ပြီး အဆင့်ဆင့် ဝင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Google Calendar Sync, Google Contacts Sync, Google Play Services တို့ရဲ့ Permissions အကုန် အောက်ပါနမူနာပုံကဲ့သို့ အစိမ်းရောင်ခြစ်ပုံစံ Allow လုပ်ပြီးသားတွေ ဖြစ်နေရပါမယ်။ အောက်ကနမူနာက Google Contacts Sync app တစ်ခုအတွက်ပဲ နမူနာပါ။ ကျန်နှစ်ခုကလဲ သူ့ကဲ့သို့ All Permissions အကုန် အစိမ်းဖြစ်နေရမယ်ပေါ့။
Auto Start List ထဲထည့်တာပြီးပြီ၊ Permissions Allowed လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ အကုန်စစ်ဆေးလို့ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို Reboot လုပ်လိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာချိန်မှာ Settings -> Sync -> Google အောက်ဝင်ကြည့်ပါက Synced Items တွေထဲမှာ Contacts ြပန်ပါလာတာတွေ့နိုင်ပါပြီ။ Manual Sync လုပ်ကြည့်ရင်လဲ Error မရှိ Sync လုပ်နိုင်တာတွေ့ရပါမယ်။
Phone Contact app ထဲမှာလဲ Contact Scource အနေနဲ့ Google Account ပါ ပါနေတာတွေ့နိုင်ပြီး Contact အသစ်တစ်ခုထည့်ရာမှာ ဘယ် Source မှာသိမ်းမလဲ မေးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလဲ Google Account ပါနေတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် Google Account မှာ မှတ်ထားတာတွေကလဲ Contact List ထဲပေါ်လာမှာပါ။